Vitsy ny zavatra izay manaitra lalina tao am-poko toy ny rehefa nandre an'i Jesosy ny Kristianina vaovao - na ny Kristianina - manao fiekem-bahoaka ny finoany amin'ny alalan'ny batisa. Mihevitra aho fa ny sasany amin'ireo namako, anefa, izay marika ny Kristianina vaovao, ary ireo sahiran-tsaina kely mikasika ny zavatra izay natao. Mandre ny Vaovao Mahafaly izay they've natao olom-baovao, fa manana fo vaovao, fa efa voasasa sy nohamarinina. Ary izy ireo dia midika hoe mieritreritra izany dia tsy miady na face fakam-panahy. Fa na iza na iza who's naha Kristianina mandritra ny herinandro dia afaka milaza aminareo that's tsy marina. Ny fanontaniana dia tsy raha toa isika ka miatrika fakam-panahy. Ny fanontaniana dia hoe, Ahoana no ho fihetsitsika ny fakam-panahy?
Namaky ny notsongaina amin'ity herinandro ity izay nanao hoe:, "Ny olona rehetra alaim-panahy. Tsy misy olona izay velona izay tsy azo rava, raha toa izany no fakam-panahy tsara, ataovy ao amin'ny toerana tsara. "moa izany ny tena fanambarana? Moa ve mbola misy ny olona izay afaka hanohitra na dia ny tsara indrindra nametraka fakam-panahy? tsara, let's mitodika any Luke 4:1-2:
Jesosy, feno ny Fanahy Masina, niverina avy tany Jordana, ary nentin'ny Fanahy tany an-efitra, izay efa-polo andro izy, dia naka fanahy azy ny devoly. Dia nihinana na inona na inona nandritra izany andro izany, ary amin'ny faran'ny azy ireo izy, dia noana.
voalohany, Ndeha miresaka mazava tsara izay mahita ny tenantsika ao amin'ny Luke's filazantsara. A kely aloha, ao amin'ny toko faha-telo, Jaona Mpanao-batisa no nitory momba an'i Jesosy sy ny batisa ny hafa, ary Jesosy mihitsy no tonga mba hataony batisa. Jaona dia nanao batisa be dia be ny olona, fa rehefa vita batisa i Jesosy zavatra hafa mitranga. Ny Fanahy Masina midina Azy amin'ny endriny tahaka ny voromailala; ary nisy feo avy any an-danitra hoe:, "Ianao no Zanako malalako,; aminao no sitrako. "Noho izany eto no Andriamanitra manambara an'i Jesosy ho mihoatra noho ny mpaminany fotsiny fotsiny, fotsiny ny Mesia; I Jesoa no ilay tena Zanakalahin 'Andriamanitra.
Rehefa avy nilaza momba io fanambarana avy amin 'Andriamanitra, ary ny eo anoloan'ny milaza amintsika izay ny vita batisa Zanak 'Andriamanitra dia hanao, Toy ny manome antsika ny tetiaran, milaza amintsika momba ny Jesus' razambeny. Ny firazanany mandeha ny lalana rehetra niverina tany i Adama. Ka dia eto isika manana ny Tompo Jesosy, izay tsy avy amin'Andriamanitra ihany ny Zanak'Andriamanitra, fa Izy koa dia taranak'i Adama, voalohany indrindra ny olona. I Jesosy no tsy manam-paharoa. I Jesosy no ilay Andriamanitra-olona.
Noho izany, izay tsara kokoa ny mijery mba hianatra ny fomba tokony hamaly ny fakam-panahy? Rehefa mijery ireo andininy roa, tiantsika ny hijery zavatra telo tokony hahatsiaro isika rehefa miatrika fakam-panahy.
I. Andriamanitra no mamela ary Mampiasa Fakam-panahy ho isan'ny ny Plan (1-2ny)
Jesosy, feno ny Fanahy Masina, niverina avy tany Jordana, ary nentin'ny Fanahy tany an-efitra, izay efa-polo andro izy, dia naka fanahy azy ny devoly.
Koa manaraka Jesosy batisa, izay no nambara ny Zanak 'Andriamanitra izay ny Ray no sitrak'Andriamanitra, Mety manantena ianao fa ny Fanahin'Andriamanitra no hitarika an'i Jesosy mba dethrone ny ratsy Heroda Mpanjaka, Na mety mandefa azy mivantana ny hanomboka ny fanompoany ny fitoriana sy manao famantarana sy fahagagana. Fa that's tsy izay ny Fanahy Masina no mitarika azy. Fa tsy ny Fanahy Masina no mitarika azy ho any an-efitra. Ny Fanahy Masina dia mitarika azy ho amin'ny toerana izay ny devoly no maka fanahy Azy.
Ary azo antoka fa ny masi-mandidy, rehetra-satria fantany Fanahy Masina dia mahafantatra fa izy no mitondra an'i Jesosy ho any amin'ny toerana tena i Satana dia maka fanahy Azy - Toy izany koa fa ny Fanahy Masina nahalala ao amin'ny Asan'ny Apostoly 20, fa izy no nitarika an'i Paoly ho any Jerosalema, ary olona Paoly ka ho nenjehina sy naiditra am-ponja any. Nilaza i Paoly, ao amin'ny loza izay eo anatrehan'i Azy, nefa no manery an'i Paoly mba handeha fa mba hitory ny Filazantsara. Izany toe-javatra tsy misy hafa. Ny Fanahy Masina dia mahafantatra fa Jesosy dia nifanatrika sy fanamby ny devoly, nefa Mitarika Azy teo ihany.
Nahoana no ny Fanahy Masina no naniraka an'i Jesosy ho any an-efitra, ka amin'izay dia halaim-panahy? Araka ny God's fanambarana fa i Jesosy no Andriamanitra-ankasitrahana sy ny Zanak 'Andriamanitra, ary Luke's firazanany izay mampiseho an'i Jesosy ho ilay zanak'i Adama koa, fakam-panahy izany mametraka ny sehatra an'i Jesosy mba hanaporofoana fa izy no iza izy vao nanambara ny ho. Ity ady tany an-efitra manome ny sehatra i Jesosy, mba hampisehoana ny tenany ho ilay Andriamanitra-olombelona.
It's efa ho toy ny fomba maro no nandray tsara ny Miami Heat vanim-potoana ity. Lebron James dia ny MVP ny fanekena, fa ny ekipany handresy ny tompon-daka can't. Dia nandao ny Cleveland Cavaliers, sy ny ekipa miaraka roa hafa mpilalao lehibe. Ary rehefa ekipa efa miditra be ny fankalazana, mirehareha fa, noho ny rehetra ny talenta ananany, dia handresy 5, 6, 7 - Mety kokoa - championships toy ny ekipa. Koa ny olona rehetra dia nihaino ny reharehako, they've nandre ao anatin'izao saritaka momba izany Super ekipa. Ary raha avy ny taona manomboka tsy maintsy mampiseho ka hanaporofo ny tenany. Moa ve ianao mahagaga izany nofy ekipa izay you've niantso ny tenanao mba ho? Ary ny haino aman-jery nijery sy scrutinized izay rehetra ataon mba hahitana raha ny manan-tantara izy ireo ekipa rehetra nanantena.
Tsara amin'ny toy izany koa lamaody, ny dingana efa napetraka ho an'i Jesosy, mba hampisehoana ny tenany ho ny Zanak 'Andriamanitra. Ho hampifaly an'Andriamanitra?
Afaka mieritreritra momba an'i Adama tao amin'ny saha. Ary natao araka ny endrik'Andriamanitra 'Andriamanitra, ny taratra God's voninahitra tamin'ny fomba tsy manam-paharoa. Fa avy eo ny mpaka fanahy, ny menarana tonga tamin'i Eva sy mamitaka izy roa tonta. Izy ireo tsy hankatò an'Andriamanitra, mino ny lainga ny menarana noho ny fahamarinana 'Andriamanitra. Adama dia tsy hita ho iza Andriamanitra nanao azy ho. Hitantsika ny Isiraely tany an-efitra mahomby ny hankatò an'Andriamanitra. Hitantsika izany hatrany manerana ny Soratra Masina. Andriamanitra no mahatonga ny olona hanome voninahitra Azy, Fa ny olona kosa ho levona mandrakizay ka tsy mankatò an'Andriamanitra.
Dia ho toy izany ny faharoa Adama ho afaka hanao zavatra voalohany tsy afaka atao? Ho Jesosy ho afaka ny hanao izay Isiraely tsy afaka manao? Ny devoly no maka fanahy an'i Jesosy avy, ary efa-polo andro. Ary Jesosy no hanaporofoana ho iza izy nanambara ny ho. Jesosy mampiseho Ny tenany ho ny Zanak 'Andriamanitra, izay tonga mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika ary iza no nanota mpisoronabe. Ary ny Fanahy Masina naniraka Azy teo hanao izany.
ankehitriny, I fa aza tiako ny fotoana mba ho azon'ny olona ny midika fa Andriamanitra Izao-mihitsy naka fanahy an'i Jesosy mba hanao ratsy. Izany no tsy marina. Fa dia tena mazava tsara ao amin'ny Baiboly fa isika alaim-panahy hanao ratsy dia tsy ho lavo any ivelany ny God's fiandrianam. It's tsy zavatra izay nitsofoka mangingina nanara-maso loatra. Tsy misy na inona na inona amin'ny tsy misy sy ny zavaboary rehetra izay ivelan'ny ny fahefana. Andriamanitra no masi-mandidy tanteraka. Tsy misy na inona na inona eto an-tany izay mety hitranga raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin'ny Andriamanitra Fara Tampony. Ity fakam-panahy mitranga amin'ny fahazoan-dalana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra namela izany ary natao ny hampiasa izany ho ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy.
Ry rahalahy sy anabavy, James mahatonga mazava tsara fa rehefa alaim-panahy isika dia tsy ho tratran'ny fakam-panahy avy amin'Andriamanitra. Nefa aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra no mamela ny fakam-panahy ary ny kasainy ny hampiasa izany ho voninahiny. Andriamanitra dia nalahelo noho ny zava-misy fa misy hery ratsy eto amin'izao tontolo izao izay miezaka miady amin'ny heriny sy ny derail anao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Fa fantatsika fa ireo tempters ny valin 'ny Ray any an-danitra. Ary Izy no hampiasa dia ireo noho ny voninahiny.
Ankehitriny dia fantatro fa misy maro amintsika izay indraindray manana hevitra kely ny fomba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny izao tontolo izao. Mihevitra isika fa hoe Andriamanitra no ankalazaina eo-bahoaka ihany ny fankatoavana toy ny fizarana ny filazantsara miaraka amin'ny mpiara-monina, , na miandry ny tsy manan-kialofana, na nitory. Tiako ho fantatrao fa tsy izany no karazana fankatoavana ihany izay zava-dehibe. Samy miankina sy tsy miankina be dia be izany ny fankatoavana. Maro tsy voatery ho ny mpanatrika mba ho anareo mba hanome voninahitra ny Andriamanitry ny Izao Rehetra Izao.
Rehefa ao manokana, ary isika izay azom-panahy amin'ny ota, Andriamanitra no ankalazaina ny ny fankatoavantsika. Andriamanitra no nomem-boninahitra, rehefa manohitra ny hamitaka lainga 'ny fahavalo, mba hanaraka ny didy ny tsara Andriamanitra. Manova ny fahatsarany, ary ny mendri-pitokisana, sy ny heriny mba hamonjy ny mpanota. Noho izany rahalahy sy anabavy, isaky ny Andriamanitra no mamela anareo halaim-panahy, ny dingana dia ho voatendry ho anareo mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mino Azy noho ny lainga ny fahavalo.
Andriamanitra no manana antony mamela antsika halaim-panahy. Amin'ity tranga ity dia mampiseho an'i Jesosy Andriamanitra mba ho ny tsy nanota Zanak'Andriamanitra, iza no manohitra ny fakam-panahy ny devoly.
II.Weakness Tsy fialan-tsiny mba manaiky ho resy
Dia nihinana na inona na inona nandritra izany andro izany, ary amin'ny faran'ny azy ireo izy, dia noana.
Tahaka ny Tompo Jesosy alaim-panahy, Izy eo amin'ny malemy sy marefo fanjakana. Ny lahatsoratra dia mazava fa i Jesosy no nifady hanina 40 andro. Rehefa tapitra ny ireo 40 andro i Jesosy noana - izay toa karazana mivandravandra; mieritreritra ny mandà ny tenanao sakafo ho an'ny 40 manontolo andro.
Matetika isika ny mihevitra an'i Jesosy ho superman, nefa izy tsy superman. Izy no Andriamanitra-olombelona. Misy fahasamihafana. I Jesosy tena lehilahy. Ary izy tsy afa-bela ny reraka, na fahalemena, na hanoanana. Raha izany dia, I Satana dia maka fanahy an'i Jesosy tao amin'ny fotoana marefo tahaka Azy noana. Ary manafika Jesosy mazava tsara ao amin'ny faritra izay milalao ny fahalemena ara-batana amin'izao fotoana izao.
Izy maka fanahy an'i Jesosy tamin'ny kokoa fanjakana avy hatrany, amin'ny sakafo, amin'ny zavatra ara-dalàna dia afaka manana. Izy maka fanahy an'i Jesosy ny zavatra izay mety ho ara-drariny ny, nefa Jesosy mandà ny tenany. Mampiseho ny tenany i Jesosy eto, mba ho ny zanak'olona izay tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo.
Ry rahalahy sy anabavy, tokony tsy ho adala ampy ny mieritreritra fa i Satana dia tsy hanafika antsika ao anatin'ny fotoan 'ny fahalemena. Namaky ny notsongaina amin'ity herinandro ity izay nanao hoe:, "Opportunity avy mandondòna ihany indray mandeha, fa ny fakam-panahy mametraka ny lakolosim-baravarana. "Fakam-panahy no tsy hamela mora. Fakam-panahy dia hitoetra sy manao anao midina. Toy ny villains ao anatin'ny horohoro sarimihetsika izay hanenjika ny tra-boina izy ireo mandra-pahatongan'ny farany hamandrika na reraka loatra ny mihazakazaka intsony. Ary i Satana dia tsy handeha hitondra izany mora anareo amin'ny fotoan-fahalemena. I Satana no fahavalo!
Izany no ho toy ny antokon'ny miaramila mijery fahalemena eo amin'ny fahavalony, ary nanapa-kevitra ny hametraka eny azy. tsara, tsy misy, that's tsy ny fomba miasa. Rehefa tafika mitam-piadiana mahita ny fahalemena, izay no fotoana tsara indrindra ho azy ireo mba hanafika, satria ny mety hisian'ny fahombiazana dia ambony. Tsara toy izany koa, izao tontolo izao, ny nofo, ary ny devoly dia tsy mametraka intsony ny lainga amin'ny fotoana fahalemena. Raha ny marina, izy ireo ihany no hamely anareo bebe kokoa.
Ahoana àry i Jesosy nahatohitra ny fakam-panahy 'ny devoly amin' ny fotoanany ny fahalemena? It's Marina fa ny devoly tsy nanana fahafahana mba hitarika an'i Jesosy hanota, Ahoana anefa no nataon'i Jesosy handresy Azy? tsara, raha nijery ny andinin-teny eto ambany, ta-hahita fa Jesosy nanao izay Adama tsy manao. Nino i Jesosy fa ny Tenin'Andriamanitra, ny Tenin'Andriamanitra i Satana. Ary Jesosy nanaiky ny sitrapony ho ny sitrapon 'ny Ray. Tamin'ny fotoana ny fakam-panahy, shouldn't miezaka izahay mba hanohitra ny faniriana fotsiny. Satria ny marina dia tsy misy amintsika matanjaka ampy.
Manohitra ny fakam-panahy amin'ny fotoana fahalemena manomboka fampianarana izany teo imason'ny ny fakam-panahy mihitsy. Manohitra ny fakam-panahy ianao, dia hiatrika ny herinandro manaraka Manomboka ity herinandro ity. Inona no fandraisana? Inona no mameno ny tenanao amin'ny? Manao ahoana ny mamahana ny finoanao? Jesosy dia tsy manan-kery. Nefa na nanana foana i Jesosy vavony, Izy dia feno ny Fanahy. Tokony hikatsaka, araka ny Efesianina Mampirisika, mba ho feno - ka nahazo ny - ny Fanahin'Andriamanitra. Tokony hanana ny atrehinay ao amin'ny Teniny, izay omeny sy manohana ny finoana ny fampanantenany. Ary tokony hanao izany miaraka amin'ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny finoana.
Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika rehefa mahatsiaro ho malemy noho ny antony maro. Mety ho reraka, na pihetseham-po notrohinao mbamin'ny faikany, na marary, na angamba we're no resy lahatra ny hery izay we're malemy nefa tsy nahalala azy. Fa na inona na inona ny fahalemena no, it's tsy fialan-tsiny mba ho atolotra ho. Nandritra ireo fotoana marefo ny tolotra ny mpaka fanahy toa manintona kokoa, fa ny Tenin'Andriamanitra dia mbola marina, ary ny famitahana i Satana dia mbola lainga.
Rehefa alaim-panahy you're haloto fitondran-tena mampahatsiahy ny tenanao efa nataon'Andriamanitra hoe:, "Tsy anao manokana, ianao dia olom-boavidy. Koa dia mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. "Ary rehefa alaim-panahy you're ho fieboeboana sy tia tena mampahatsiahy ny tenanao efa nataon'Andriamanitra hoe:, "Aza mijery fotsiny ny an'ny tenanao, fa ny hahasoa ny hafa." Amin'ny fotoana ny fahalemena isika, dia tokony, tahaka an'i Jesoa, hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra sy mankatò Azy.
Mamaky andalana ity dia afaka miantehitra mankany amin'ny ho kivy, mieritreritra, "Man, Jesosy dia masina izany Tiako raha ho tahaka Azy,"na, "Man, I'm bebe kokoa tahaka ilay Adama voalohany noho ny faharoa. Izaho no tahaka an'i Jona noho ny an'i Jesosy. "Ry rahalahy sy rahavavy, fa marina ny Kristianina tsirairay sy ny tsy-Kristianina. Isika rehetra dia tahaka an'i Jona bebe kokoa noho ny an'i Jesosy.
Fa ny zavatra momba ny fankatoavana 'i Jesoa fa isika dia mamaky momba ny eto dia ny hoe i Jesosy fa tsy ny olon-kafa fotsiny. Jesosy dia tsy hafa fotsiny ny anankiray amintsika izay nitranga ny ho mpankatò iray. No, Jesosy no Adama vaovao, izay tonga hisolo tena antsika indray. Ny fankatoavana an'i Jesosy tsy mampifaly an'Andriamanitra amin'izany fotoana, fa Jesosy mitandrina ho antsika fa mety ho mampifaly an'Andriamanitra. Jesosy manao zavatra couldn't atao. Dia mandalo ny fitsapana izay tsy afaka nitranga i Adama sy ny Isiraely tsy afaka nitranga - ary tsy misy aloha na aorian'ny Azy nahazo nandalo. Jesosy mitandrina izay tsy misy amintsika afaka. Jesosy nandresy ny fahavalo tsy misy amintsika afaka handresy. Ary izany faharesena manokana, any an-efitra, dia nanondro ny fandresena resy Satana izay hitranga any amin'ny faran'ny Luke's filazantsara.
Na dia aza Jona mangidy loatra ny hitory mihitsy aza ny fahavalony, ny Tompo Jesosy dia tonga tety an-tany sy maty noho ny fahavalony. Teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy nandoa ho an'ny tsirairay ny fotoana izay efa nomena ny fakam-panahy. Isaky ny fotoana tokana. Fa ny mpino, tsy misy manota ny antsika fa i Jesoa dia tsy mandoa ny. Ary Jesosy nitsangana avy ao am-pasana, handresy ny ota, fahafatesana, ary ny devoly. Ny devoly no resy. Ary raha mety miala amin'ny fahotantsika ary mametraka ny finoana an'i Kristy dia afaka mandray ny valisoa izay azo. Nahita ny fankatoavana an'i Jesosy dia tsy tokony hahakivy antsika, tokony hamporisika antsika.
Tamin'ity herinandro ity rehefa alaim-panahy hanota, tsarovy fa ny fahavalo efa resy teo anoloan'ny ny Tompo. Ianao fa aza tsy maintsy manaiky ho amin'ny fahotana. Ny mpaka fanahy Efa very. Ny gadra no tapaka. Mandehana araka ny fahafahana novidina ho anareo amin'ny hazo fijaliana. Fa aza vokatra ho amin'ny fitakian'ny resy ny fahavalo. Maty Jesosy sady efa nitsangana, mba ho afaka hanohitra ny mpaka fanahy, ary jereo tahaka Azy. Isika indwelled amin'ny Fanahy iray ihany ny tena ary entiny ny mpitondra, ny tena mitovy fitaovam-piadiana.
Rehefa alaim-panahy, let's tadidio fa Andriamanitra no mamela ary mampiasa fakam-panahy, fa fahalemena dia tsy fialan-tsiny mba manaiky ho fakam-panahy, ary izay ny mpaka fanahy Efa resy.
Ny mpanoratra ny Hebreo mijery izany fakam-panahy sy nahita fampaherezana lehibe any:
Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa iray izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra, tahaka antsika, Nefa Manetry dia tsy manam-pahotana. Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amim-pahatokiana, ka mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena anay amin'ny andro mahory. (Hebreo 4:15-16)
Ny Tompo Jesosy tsara ny nanjo an'i amintsika. Izy efa nalaim-panahy tahaka antsika alaim-panahy, fa Izy mihitsy amin'ny fanaovana mandrakizay nanome Azy ny tonga lafatra mpisoronabe. Noho izany isika dia afaka hanatona ny seza fiandrianany amim-pahatokiana, mitalaho famindram-po sy ny fahasoavana. Let's hankany aminy ankehitriny.
Jem973 • Oktobra 29, 2013 amin'ny 2:26 PM • navalin'i
Misaotra betsaka noho ny fampianarana ! Tena lehibe tokoa ny mahafantatra fa tena Andriamanitsika mahalala ny fakam-panahy rehetra atrehintsika ! Tena lehibe tokoa ny mahafantatra fa efa nalaim-panahy i Jesosy no tsy nanome in, ary ho fantatrareo fa ny devoly dia resy !!
Misaotra betsaka noho ny fampaherezana ! Andriamanitra anie hitahy ny fanompoanao sy ny fianakavianao.
(Miala tsiny ho an'ny Anglisy, Aho frantsay)